Sidee buu ka yeeli doonaa Madaxweyne Xasan sheekh Maamuladii Xiriirka dhow lalahaa Famaajo? – GOBOLADA.COM
May 25, 2022 May 25, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Sidee buu ka yeeli doonaa Madaxweyne Xasan sheekh Maamuladii Xiriirka dhow lalahaa Famaajo?
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud markii la doortay, waxa uu kulan la qaatay madaxda maamul gobboleedyada, wuxuna sheegay inuu si dhaw ula shaqeyn doono.
Shantii sanno ee la soo dhaafay madaxda maamul goboleedyadu, waxay u qaybsameen kuwa aad ugu dhaw dawladda iyo kuwa khilaaf ba’ani uu dhexmaray. Dawladdu waxay kaalin mug leh ku lahayd in maamullada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ay madaxweynayaal ka noqdaan Cabdicasiis Laftagareen, Axmed Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe, waxayse ku guuldareystay in ay wax saameyn ah ku yeelato doorashooyinkii ka dhacay Puntland iyo Jubbaland ee ay ku soo kala baxeen Siciid Dani iyo Axmed Madoobe.
Hadal heynta ugu badan ayaa ah mustaqbalka madaxda maamul goboleedyada aadka ugu dhawaa madxweynihii hore ee doorashada looga adkaaday Maxamed cabdillaahi Farmaajo.
Markii Farmaajo uu xilka wareejiyay Waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka socda magaalada Muqdisho.
“Awoodaha dawladda federaalku leedahay iyo awoodaha ay leeyihiin dawlad goboleedyadu dastuurka ayaa lagu kala saaray kaliya waxa la is waydiin karaa Madaxda dawlad goboleedyada qaarkood, siyaasadda ku dhex milmay, qayb ka mid ah u ol’oleynayay , illaa qaarkood markii dambe hoolka ku dhex oynayeen, kuwaas waa la is weydiin karaa, dee kuwaasna masiirkooda shucuubta ay xukumaan oo dawlad goboleed kaasi ka dhex jirto ayaa masiirkooda iska leh,” ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi.
“Laakiin dawlad goboleedyada aadka ugu dhawaa Farmaajo, ma yihiin kuwo adeeggii looga baahnaa iyo shaqadii loo igmaday qabta, shucuubta deegaannadaas ayay ku xiran tahay, Dawladdu Federaalku waxay ku qasban tahay, haddii iyagu aanay go’doon is galin, agoon iska dhigin, haddii iyagu aanay colaad is galin oo aanaysan noqon meelahooda kuwa lagala dirirayo Dawladda Federaalka, waxan u maleynayaa in madaxweynaha nabadoonka ah uu gogol nabadee u fidiyay, wada kulmeen, wada shaqeyn ay ku balameen, dee halkaasna ay ka ambaqaadmi doonto wada shaqayn rasmi ah iyo in lagu koontaroolo inay yihiin kuwo adeegii loo baahnaa u qabanaya dadka ay madaxda u yihiin,” ayuu yiri Fiqi
“Federaalku macnihiisu maaha in Confederal oo kale loola dhaqmo, Dawladdii Dhexe waayo waxay hoos imaanayaan Dawladda Dhexe, laakiin Confederaal waa Dawladdo iskood u taagan, marka waxad moodaa in hannaanka y u shaqeynayeen maamul goboleedyadeenu mid caqabado badan ku sameynaysay Dawladda Dhexe sababtoo ah lacag uunbey soo samaysanine intii kale, waxyaabo aan loo ogoleyn bay sameynayeen, arimaha dibadda way ka reeban tahay, in ciidamadoodu hub la soo dagaan iyadoo Dawladdii Federaalku joogto, ma araktay qalbeeyaan, waxyaabaha ay sameynayeen aadbey runtii u aheyd arimo xadgudub ku ah Dawladda Dhexe.” ayuu yiri Dalxa.
Halka u ka soo bilowday khilaafka ayaa ah fahamka Federaalka laga haysto, inkastoo dastuurku kala xadeynayo awoodaha labada dhinac haddana waxa meesha ka maqan shuruuc badan oo kala reebtada u kala diri lahayd dawladda federaalka iyo maamuul goboleedyada.
Madaxweyne Xasan Sheekh waa waayo arag u war haya wixii ka qabsaday maamul goboleedyada sannadihii uu xafiiska joogay ee u dhaxeysay 2012 illaa 2017, inkastoo qaarkood uu isagu lahaa hindisaha lagu dhisay haddana khilaaf la’aan ma ahayn oo waxay dawladdiisa dhawr jeer isku dhaceen Jubaland iyo Puntaland, waxana looga fadhiyaa siyaasad xasiloon oo ka dhabaynaysa oraahdiisii caanka noqotay intii uu o’olaha doorashada ku jiray ee Soomaali Heshiis ah dunidana la heshiis ah.